फेरियो लकडाउन मोडालिटी : असार १ गतेदेखि के खुल्छ के खुल्दैन ? (सूचीसहित) | DNFMEDIA
काठमाडौं : लकडाउनको ८० औं दिनमा सरकारले मोडालिटी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। २०७६ चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने निर्णय बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले सरकारको २१ दिने योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
योजना अनुसार अत्यावश्यकबाहेक उद्योग, कलकारखाना, सरकारी र निजी कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सँगै सरकारले खोल्न नमिल्ने क्षेत्रमा शैक्षिक संस्थादेखि खेलकुद मैदान हुँदै शैलुनसम्म परेका छन्।
Previous: गोरखाका एक जना कोरोना संक्रमित निको भए
Next: गोरखामा पनि जोरबिजोर प्रणाली : ‘सडकमा सवारी चापसँगै संक्रमणको जोखिम उच्च’